အချိန်ကိုအစီအစဉ်များကို TURN OFF ဖို့အစီအစဉ်ကို - PROGRAM တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်း - 2019
အချိန်ကိုအစီအစဉ်များကို turn off ဖို့အစီအစဉ်ကို
ဘယ်လာရုစ်၏အကြီးဆုံးအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေး Beltelecom မကြာသေးမီက OGO အလားတူအခွန်အစီအစဉ်များအဖြစ် router များ, နှစ်ဦးစလုံးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသောအရာအောက်မှာ Sub-အမှတ်တံဆိပ် ByFly, ဖြန့်ချိခဲ့သည်! ယူကရိန်းအော်ပရေတာ Ukrtelecom ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာကျွန်တော်တို့ Sub-အမှတ်တံဆိပ် router များကို configure သင်မည်သို့မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်။
Options ကို ByFly modems နဲ့သူတို့ရဲ့ setting များကို
ပထမဦးစွာတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုကိရိယာများအကြောင်းအနည်းငယ်စကားများ။ အော်ပရေတာ ByFly သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း router များအများအပြားရွေးချယ်စရာနေသောခေါင်းစဉ်:
Promsviaz M200 ပြုပြင်မွမ်းမံ A နှင့် B (analogue ZTE က ZXV10 W300) ။
Promsvyaz H201L ။
Huawei က HG552 ။
တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေသိသာစွာကွဲပြားနီးပါးမျှဟာ့ဒ်ဝဲ device ကိုပေးသောနှင့်ဘီလာရုစ်၏ဆက်သွယ်ရေးသမ္မတနိုင်ငံ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ အသုံးပြုသူများအတွက် Key ကိုအော်ပရေတာ setting များကိုတူညီကြသည်, သို့သော်အချို့ပစ္စည်းများကိုကျနော်တို့ကအသေးစိတ်ဗားရှင်းအတွက်ဖော်ပြထားခြင်းတံ့သောအရာကိုယင်းဒေသအပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ Considered router များသည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအသွင်အပြင် configuration ကို interface ကိုဖြစ်ကြသည်။ အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကပြောသည် devices များတစ်ဦးချင်းစီအတွက် configuration ရဲ့ features တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့။
Promsviaz M200 ပြုပြင်မွမ်းမံ A နှင့် B
ဤရွေ့ကား router များစာရင်းပေးသွင်းထားသူ devices များရဲ့ကျယ်ပြန့်အများစုတက်အောင် ByFly ။ သူတို့ကအသီးသီးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသာထောက်ခံမှုနောက်ဆက်တွဲ-တစ်ဦးကစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အနောက်ဆက်တွဲ-B ကကှာခွား, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်သူတို့တူညီကြသည်။
ဆက်သွယ်မှု Promsvyaz Router ကပြင်ဆင်နေသည်၎င်း၏အတန်းထဲတွင်အခြား devices များအဘို့ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကှာခွားမထားဘူး။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအတွက် modem ၏တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်, ပြီးတော့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးနှင့်ကေဘယ်လ်ကချိတ်ဆက် ByFly, ပြီးတော့ LAN-cable ကိုကနေတဆင့်ကွန်ပျူတာကို router ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Next ကို TCP / IPv4 ရယူဘို့စမ်းသပ် parameters တွေကိုအမှာစကား: ဆက်သွယ်မှုမခေါ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကို item စာရင်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုအသုံးပြုပါ။
သတ်မှတ်ချက် configure လုပ်ဖို့, Configuration modem ကိုသွားပါ။ မဆိုသင့်လျော်သောဝဘ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုသူများနှင့် email လိပ်စာ Start192.168.1.1။ အဆိုပါ entry ကို box ကိုနှစ်ဦးစလုံးလယ်ကွင်းထဲတွင်စကားလုံးရိုက်ထည့်admin ရဲ့.
အဆိုပါ interface ကို tab ကိုဝင်ပြီးနောက် "အင်တာနက်ကို" - ကလိုအပ်အခြေခံ settings ကိုတည်ရှိသည်။ က Wired ကွန်နက်ရှင် ByFly အော်ပရေတာစံချိန်စံညွှန်းများအပေါ်တစ်ဦး PPPoE ကွန်နက်ရှင်ကိုအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်တည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အောက်ပါ options များ:
"VPI" နှင့် "VCI" - အသီးသီး0င် 33 ။
"ISP က" - PPPoA / PPPoE ။
"အသုံးပြုသူအမည်" - အစီအစဉ်အောက်မှာ"Договора@beltel.byအရေအတွက်က"အဆိုပါကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ။
"Password ကို" - ထိုဒေတာများကိုပံ့ပိုးပေးသူအရသိရသည်။
"လမ်းကြောင်းမူလသတ်မှတ်" - "ဟုတ်ကဲ့" ။
ပုံမှန်အားဖြင့်, ထို router ကိုသာ device ကို cable ကိုချိတ်ဆက်သောကွန်ပျူတာများအတွက်ကွန်ယက် access ကိုဆိုလိုသည်, တစ်ဦးတံတားအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်သို့မဟုတ် Laptop ကိုမှ Wi-Fi ကိုဖြန့်ဖြူး၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကိရိယာကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ဤအခွင့်အလမ်းပါလိမ့်မယ်။ ပွင့်လင်း tabs များစီစဉ်တ "Inteface Setup ကို" - "LAN"။ အောက်ပါ parameters များကိုသုံးပါ:
"အဓိကက IP adress" -192.168.1.1.
"subnet mask" -255.255.255.0.
"DHCP" - Enabled ၏အနေအထား။
"DNS ကို Relay" - အသုံးပြုမှုအသုံးပြုသူသာလျှင် DNS ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူ။
"မူလတန်းနှင့် DNS Server ကို" နှင့် "က Secondary DNS Server": ဒေသတွင်းမှာ၏တည်နေရာပေါ် မူတည်. ။ ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းတရားဝင်က်ဘ်ဆိုဒ်လင့်ခ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် « DNS ကို-Server ကို Configuration ".
စာနယ်ဇင်းများ "Save" ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုယူပြောင်းလဲမှုများများအတွက် router ကို restart ချလိုက်ပါ။
ဒါ့အပြင်ထိုအ router များပေါ်တွင်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကို configure ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦး bookmark ကိုဖွင့်ပါ "ကြိုးမဲ့"သို့သော်လည်း parameter ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်တစ်ခါသုံး "Inteface Setup ကို"။ အောက်ပါ options များပြောင်းနည်း:
"Access Point" - activated ။
"ကြိုးမဲ့ Mode ကို" - 802.11 ခ + g ကို + n ။
"PerSSID ပြောင်းလဲမည်" - activated ။
"အသံလွှင့် SSID သို့" - activated ။
"SSID သို့" - သင့် Wi-Fi ၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
"စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းအမျိုးအစား" - ဖြစ်နိုင်ရင် WPA-PSK / WPA2-PSK ။
"လျှို့ဝှက်ကုဒ်" - TKIP / AES ။
"Pre-Shared Key ကို" - ကာကွယ်ကြိုးမဲ့ကုဒ်မဟုတ်ဘဲအက္ခရာ 8 လုံးထက်လျော့နည်း။
သင့်ရဲ့အပြောင်းအလဲ Save, အဲဒီနောက် modem restart ချလိုက်ပါ။
အဆိုပါကြီးသည် modem ByFly ၏ဗားရှင်းပေမယ့်နေဆဲအများအပြားသုံးစွဲသူများဘီလာရုဝေးလံသောနေရာများအထူးသဖြင့်ဒေသခံများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ Option ကို Promsviaz H208L နှင့် set up device ကိုတစ်စက္ကန့်မော်ဒယ်ကိုကူညီမှသာအချို့ဟာ့ဒ်ဝဲဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်မတူ, ဒါကြောင့်အောက်ကလမ်းညွှန်။
၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုအထက်တွင်ဖော်ပြထားကှာခွားပါဘူး Step ။ နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် configuration မှဝင်ရောက်ခွင့်၏နည်းလမ်းနဲ့ဆင်တူသည်: ရုံလိပ်စာသို့သွားပါ, သင့် web browser ကို run192.168.1.1သငျသညျပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ဘယ်မှာadmin ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဒေတာအဖြစ်။
အဆိုပါ modem configure လုပ်ဖို့, ဖွင့်လှစ် "ကွန်ယက် Interface ကို"။ ထိုအခါကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "WAN Connection ကို" နှင့် tab ကို select လုပ်ပါ "ကွန်ယက်"။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဆက်သွယ်မှုအချက်ဖြစ်ပါသည် "Connection ကိုအမည်" - option ကိုPVC0သို့မဟုတ်byfly။ ကလစ်နှိပ်, ဤအမှုကိုပြုသောဘဲလျက် «ဖျက်ပစ်ပါ» ချက်ချင်း Router က mode မှာအလုပျလုပျဖို့ device ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်ရန်။
"အမျိုးအစား" - PPPoE ။
"Connection ကိုအမည်" - PVC0 သို့မဟုတ် byfly ။
"အသုံးပြုသူအမည်" - Promsviaz M200 ၏အမှု၌ကဲ့သို့တူညီသောပုံစံ:အရေအတွက်အားдоговора@beltel.by.
"Password ကို" - သင်သည်သင်၏ ISP ကထံမှလက်ခံရရှိစကားဝှက်။
စာနယ်ဇင်းများ "Create" များအတွက်ထဲသို့ဝင် parameters များကိုသုံးပါ။ အပိုင်းများတွင်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုတည်ထောင်ထား "WLAN" main menu ကို။ ပထမဦးဆုံးအဖွင့်လှစ်တဲ့ item "Multi-SSID သို့"။ ဤအခြေလှမ်းများသလား:
"SSID သို့ Enable" - tick ။
"SSID သို့အမည်" - သင်က Wi-Fi ချင်သောနာမတျော၏နာမကိုအမှီ Specify ။
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Submit" ပွင့်လင်းတဲ့ item "လုံခြုံရေး"။ ဤတွင်ထည့်သွင်း:
"Autentication အမျိုးအစား" - option ကို WPA2-PSK ။
"WPA Passphrase" - ကွန်ယက်မှ access များအတွက်ကုဒ်စကားလုံး, အင်္ဂလိပ်စာလုံးအနည်းဆုံးအက္ခရာ 8 လုံး။
"WPA Encryption Algorithm" - AES ။
တနည်းကား, ခလုတ်ကိုကိုသုံးပါ "Submit" နှင့် Modem ကို reboot ။ ဒီ parameter သည်အတွက် setting ကိုစစ်ဆင်ရေးချော Router ကစဉ်းစားသည်။
နောက်ဆုံးဘုံအမျိုးအစား - Huawei က HG552 အမျိုးမျိုးသောပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဤပုံစံအညွှန်းကိန်းရှိနိုင်ပါသည် -D, -f-11 နှင့် -e။ သူတို့ကနည်းပညာပိုင်းကွာခြားပေမယ့်ဒီဇိုင်းကို Configuration နီးပါးတူညီမျိုးကွဲရှိသည်။
ဤစက်ကိရိယာ၏ algorithm ဇာတ်စင် preset နှစ်ခုသည်ယခင်သူတွေကိုဆင်တူသည်။ နောက်ထပ်မှာတည်ရှိပြီးသောဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အတွက် configuration utility ကိုရိုက်ထည့်ပါကနောက်ဆုံး configure လုပ်ဖို့ modem နှင့်ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ပြီးနောက်192.168.1.1။ အဆိုပါစနစ်အတွက် log ဖို့လှုံ့ဆျောပေးလိမ့်မယ် - "အသုံးပြုသူအမည်" အဆိုပါအဖြစ်သတ်မှတ်ထားစူပါအဒ်မင်, "Password ကို" - ဘယ်လို! @HuaweiHgwထိုအခါစာနယ်ဇင်း "ဝင်မည်".
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီ router ကိုအပေါ်ကိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် settings ကို "အခြေခံ"အပိုင်း "WAN"။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာရရှိနိုင်သော Configure လုပ်လို့ရတဲ့ကွန်နက်ရှင်ကို select - ကဟုခေါ်သည် "အင်တာနက်"အက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များကိုအစုတခုအားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ထိုအခါ configuration နဲ့အတူရှေ့ဆက်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းတန်ဖိုးများနေသောခေါင်းစဉ်:
"WAN Connection ကို" - Enable လုပ်ထားပါ။
"Connection ကိုအမျိုးအစား" - PPPoE ။
"အသုံးပြုသူအမည်" - များသောအားဖြင့် beltel.by @ ပူးတွဲသောရန်စာရင်းပေးသွင်းထားသူသဘောတူညီချက်၏နံပါတ်ပါဝင်ပါသည်ရာရဲ့ login ။
"Password ကို" - ထိုစာချုပ်ကနေစကားဝှက်။
စာနယ်ဇင်းရဲ့အဆုံးမှာ "Submit" ပြောင်းလဲမှုများကို save နှင့် Router က reboot ရန်။ ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူပြီးဆုံးသောအခါ, wireless network ကို setting များကိုတပ်ဆင်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
Wi-Fi ကို setting များကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်တည်ရှိသည် "အခြေခံ", ထို option "WLAN", bookmark "ပုဂ္ဂလိက SSID သို့"။ အောက်ပါချိန်ညှိ Make:
"တိုင်းဒေသကြီး" - ဘယ်လာ။
ပထမ option "SSID သို့" - ကွန်ယက် Wi-Fi များအတွက်ဆန္ဒရှိ name ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ဒုတိယ option ကို "SSID သို့" - Enable လုပ်ထားပါ။
"လုံခြုံရေး" - ကို WPA-PSK / WPA2-PSK ။
"WPA Pre-Shared Key ကို" - Wi-Fi ကိုတစ်ဦးအနည်းဆုံး 8-ကိန်းဂဏန်းဖို့ချိတ်ဆက်မှုအတွက် code ကိုစကားလုံး။
"လျှို့ဝှက်ကုဒ်" - TKIP + AES ။
စာနယ်ဇင်းများ "Submit" အပြောင်းအလဲတွေလက်ခံဖို့။
ဤသည် router ကိုလည်း WPS တစ် function ကိုတပ်ဆင်ထားသည် - သင် password တစ်ခုဝင်မပါဘဲ Wi-FEMA ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီ option ကိုသက်ဝင်စေရန်, သင့်လျော်သောမီနူးကို item နှင့်စာနယ်ဇင်းကို tick ကျေးဇူးပြုပြီး "Submit".
Read more: အဘယ်အရာကို WPS နှင့်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လို
Huawei က HG552 setting ကိုပြုမိသည်ကို - သုံးနိုင်ပါသည်။
ဒီ algorithm ကိုအလိုအရနှင့် configuration ByFly modems လုပ်ဆောင်။ ၏သင်တန်း, စာရင်း devices များဤမော်ဒယ်များမှကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်: သင်ဥပမာ, တစ်ဦးထက်ပိုအစွမ်းထက်ဝယ်သင့်လျော်စွာဥပမာတစ်ခုအဖြစ်အထက်ညွှန်ကြားချက်ကို အသုံးပြု. ညှိနိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ device ကိုဘီလာရုအော်ပရေတာ Beltelecom ရန်နှင့်အထူးသဖြင့်အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်, ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ကိုပင်မှန်ကန်သော parameters တွေကိုနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါစေခြင်းငှါစိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည်။